澳门信誉棋牌赌城Umkhiqizi Ohamba Phambili Wezinsiza Zokwakha Eziyisisekelo Emhlabeni. Futhi singabakhiqizi bemishini abanomlando weminyaka eyi-100.
澳门信誉棋牌赌城Ukusikwa Kwe-Trench & Ukuxuba kabusha Imishini Yezinsimbi Zodonga Olujulile
澳门信誉棋牌赌城I-JB ewuchungechunge i-Hydraulic Walking Pig Rig
澳门信誉棋牌赌城Abakwa-SEMW bakha uhlelo olususelwa emakethe futhi lunikezelwe kumishini eyisisekelo ejulile.
I-SEMW ihlinzeka "ngemikhiqizo emisha, iqembu lochwepheshe, insizakalo enhle" kanye necebo lokuwina lokuwina kumakhasimende ethu.
澳门信誉棋牌赌城Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi amakhulu wobunjiniyela, njengama-Expressways, ama-skyscrapers, amabhuloho, ongaphansi komhlaba, izikhumulo zezindiza, ama-docks, iziteshi zamandla, njll.
澳门信誉棋牌赌城Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu noma nge-pricelist, sicela ushiye i-imeyili yakho futhi sizoxhumana kungakapheli amahora angama-24.